အားကောင်းသောပိုးဟပ်ပိုးမွှားပိုးသတ်ဆေးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး Friendly Control ဂျယ်လ်ဆီးခြင်း - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
အစွမ်းထက်ဆန့်ကျင်ပိုးဟပ်ပိုးသတျဆေးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး Friendly ထိန်းချုပ်ရေး Gel Syring က
$7.08 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $8.55
အစွမ်းထက်ဆန့်ကျင်ပိုးဟပ်ပိုးသတျဆေးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး Friendly ထိန်းချုပ်ရေး Gel Syring က backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
သက်ဆိုင်ဧရိယာ: 150-200 ㎡
သက်ဆိုင်သည့်:ရိယာ: <20 စတုရန်းမီတာ
အချိန်အသုံးပြု: 480 နာရီ
Net ကအလေးချိန်: 10g
non-အဆိပ်သင့်, non-ညစ်ညမ်းမှု, ဒါဟာပိုပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှု non-ယားယံဖြစ်ပါသည်, သင်သည်သင်၏မိသားစုထဲမှာအသုံးပြုစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ pheromones ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပေါ်ပာပ် feed ကိုတိုက်ရိုက်ဗိုင်းရပ်စ် PfDNV အားဖြင့်ကူးစက်ခံရပါလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့အပေါ်အစာကျွေးဖို့ပာပ်ကိုဆွဲဆောင်။
PfDNV နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တပြင်လုံးကိုပာပ်အုပ်စုတစ်စုကိုသတ်, လူလုပ်ဘေးဥပဒ်တစ်ခုကြင်နာ likes ။
လျှောက်လွှာ၏ Method ကို:
လိုအပ်မဆိုစက်မှမရှိပါ, သင်ရုံပေါ့ပေါ့ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုကွာဟချက်, ထောင့်, တွင်း, အဖြစ် roaches မကြာခဏပေါ်လာရှိရာအမိုးအကာအတွက်လူသတ်သမားကိုနှိပ်
သည်အခြား 30-45cm တဦးတည်းအစက်အပြောက်ထားပါနှင့်တိုင်းအားကစား၏အရွယ်အစားရုံ Mung bean ကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏။
5-7days ပြီးနောက်ငါးစာဂျယ်ထောက်ပံ့, နှင့်သောက်သုံးသောပထမဦးဆုံးလျှောက်လွှာသောက်သုံးသော၏ 30% ဖြစ်ပါသည်, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် roaches သတ်ပစ်ရန်
မှတ်ချက်: သူတို့ရဲ့မှားစား၏အမှု၌သင်တို့၏သားသမီးတို့နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအနေဖြင့်ပိုးသတ်ဆေးကွာထားပါ။ Effect အသုံးပြုခြင်း:
တစ်ဦးအပတ်ပြီးနောက်: ပိုးဟပ်၏ 60-70% အသတ်ခံခဲ့သနှင့်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုလျှော့ချသိသာဖြစ်ကြသည်။
တစ်လပြီးနောက်: ပိုးဟပ်၏ 90% အသတ်ခံခဲ့ပြီးကျန်ရှိသောပိုးသတ်ဆေးနေဆဲတစ်ဝက်တစ်နှစ်လောက်အနည်းဆုံးအားအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ပိုးဟပ်ထိန်းချုပ်ရေး Gel Syring က x ကို 1
Vaziavo menesi, matosi pakuotes, Dar nebandziau, nes prapuole testuotojai panaudojus pries tai isigyta preparata ဖြစ်ပါတယ်။
Пришлобыстро။ Будемпробовать !!!
ဖောက်သည် 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 98492 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
အမျိုးသမီးများအတွက် Breathable Sports Bra & Leggings ၂ ပိုင်းခွဲ
Excellent က, အရည်အသွေးဝတ်စုံကို။ အစာရှောင်ခြင်းတင်ပို့ အပတ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဝတ်စုံကိုသင်အကြံပြုသည်။ သင်နောင်တမရပါ။
အလွန်အေးမြသောဝတ်စုံ! ဒီနေ့ငါလေ့ကျင့်ရေးအပေါ်ချက်ချင်းကြိုးစားပါလိမ့်မယ်! အရွယ်အစား M ကောင်းစွာထိုင်တော်မူ၏။ အမြင့် 156, 95-75-95 ။ နောက်တစ်ခါငါ s ကိုမှာထားလိမ့်မယ်။
Оченькрутойкостюм! Селидеально။ спортомбудетвкайф။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကိရိယာအစုံ, ဒုတိယတို, အရည်အသွေးဗုံးအမိန့် !!
အမျိုးသမီး ၀ တ်အစင်းနုရောင်ခါးသားရေဒေါက်အနိမ့်အမျိုးသမီးဝတ်စကပ်